Attic Apartment For Rent (ID-230) အား စမ်းချောင်း တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
Attic Apartment For Rent (ID-230)
Living area 1250 sqft with attic apartment for rent in Sanchaung Township. Near to go Gwa Market. Hall type.
Monthly Rent Price - 13 Lks (Nego)
၁၂၅၀ စတုရန်းပေအကျယ်ရှိသော ထပ်ခိုးပါသည့် ငှားရန် တိုက်ခန်းဖြစ်ပါသည်။ တိုက်ခန်းမှာ - ဂွဈေးအနီး စမ်းချောင်းမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ တိုက်ခန်းအတွင်း အခန်းများဖွဲ့စည်းထားခြင်းမရှိသေးပါ။ တိုက်ခန်း၏ လစဉ်ငှားရမ်းခမှာ - ၁၃ သိန်း (ညှိနှိုင်း) ဖြစ်ပါသည်။
ငှားရန်ရှိသော တိုက်ခန်း (ID-230)
အမည်: Attic Apartment For Rent (ID-230)